Muusikada iyo mustaqbalka guur guura | Martech Zone
Muusikada iyo Mustaqbalka Moobilka
Talaado, Nofeembar 20, 2012 Douglas Karr
Kama hadleyno wax badan oo ku saabsan warshadaha muusikada halkan barta tiknoolajiyada suuqgeynta laakiin waa, laga yaabee, mid ka mid ah tusaalooyinka ugu weyn ee isbeddelka dhaqanka macaamiisha. Waxaan ka wareegnay warbaahinta muusikada una wareegnay aaladaha muusikada… iminkana waxaan ka wareegeynaa aaladaha oo waxaan u wareegeynaa Waxaan si qurux badan uga tagay iTunes gabi ahaanba iminkana waan isticmaalaa Spotify wax walba. Baadhitaanku wuxuu ku dhacaa shabakaddayda bulshada iyo raadiyaha Spotify ee isku dhafan sida dhadhanka dhadhanka si uu iigu ixtiraamo heeso cusub.
Muusikiisteyaasha, hadaf uma ahan hada in la gaajoodo oo loo ciyaaro qalbiyadooda dad badan oo suurtagal ah si loo helo dareenka duubista mas'uuliyiinta shirkadaha. Weli way ciyaarayaan qalbigooda, laakiin hadda waxay ku saabsan tahay ka hor imaanshaha taageerayaasha iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada. Samee dhagaystayaal bulsho ahaaneed ayna fulinayaan hawlwadeennada duubista. Maaddaama muusiggu uu wareegayo, waxaa muhiim ah in la horumariyo joogitaanka mobilada waana taas waxa MobBase sameeyey - sameynta codsiyo caado ah oo ka caawiya kooxaha inay kobcaan taageerayaashooda ayagoo u qeybinaya muusig qalabka ay wataan.
Infograafigani ka yimid MobBase wuxuu bixinayaa xoogaa aragti ah oo ku saabsan isbeddelka muuqaalka muusigga iyo hagida badbaadada ee farshaxan-yahannada si ay ula qabsadaan.
Tags: mobbaseapp mobilemuusikada gacantaMusicwarshadaha musicbarnaamijka moobilka muusikadaSpotify
Ka Qeybgalka Bulshada iyo Kobaca Bulshada CRM